April 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 30, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) 19 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay Soomaaliya 24-kii saac ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya. 18 kamid kiisas cusub ayaa laga helay Muqdisho, halka […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobab mahiigaan ah oo khasaare geysan kara ayaa la sadaaliyay in ay ka di’i karaan deegaanada Puntland, sida lagu sheegay fariin digniin ah oo ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland maanta oo […]
Qardho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hal milyan oo dollar ugu deeqday dadaalada loogu gurmanayo magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Qardho. Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa shir jaraaid oo uu ku […]
April 29, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Gaadiid sida gargaar ay ku jiraan cuno iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha oo ka baxay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland ayaa ku sii jeeda magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Qardho. […]
April 28, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah kormeeray khasaaraha ay sababeen daadadka ku dhuftay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu ay sameysay guddi wasiiro ah ayna […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix qof oo saddex caruur ah ay ku jirto ayaa ku geeriyooday kadib daadad ay keeneen roobab mahiigaan ah oo ka da’ay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar, sida uu sheegay duqa […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Daad ayaa ku fatahmay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar kadib roobab mahiigaan ah oo xalay ka da’ay halkaas. Dadka deegaanka ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay in ay jirto khasaare kala duwan […]
April 27, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah Cabdi Xasan Xuseen u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska, isaga oo badali doona Janaraal Muxyadiin Axmed Muuse. Cabdi Xasan Xuseen oo loo yaqaan Cabdiyare […]
April 26, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada guud ee dhimashada cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa gaartay 23 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Axada, ayaa wasaaraddu ku sheegtay in […]
April 25, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) 62 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay Soomaaliya maanta, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay wasaaradda caafimaadka galabta oo Sabti ah. Labo qof ayaa maanta u geeriyooday xanuunka, sida ay wasaaradda […]